प्रेम दिवशमा गुलाफको अभाव, के दिएर प्रेम प्रश्ताव गर्ने ? - Baikalpikkhabar
प्रेम दिवशमा गुलाफको अभाव, के दिएर प्रेम प्रश्ताव गर्ने ?
फागुन २ / पश्चिमा संस्कृति भए पनि त्यसको प्रभाव बढ्दै जाँदा पछिल्लो समय नेपालमा प्रणय दिवस ‘भ्यालेनटाइन डे’ मनाउने प्रचलन बढ्दै गएको छ । दिवसमा युवायुवतीको आकर्षण र गुलाफको फूलको माग बढ्दो छ ।
आइतबार, ०२ फागुन, २०७७, बिहानको ०९:५२ बजे